Indhocadde oo ku eedeeyay dowlada Soomaliya inay u nugushahay maamulada Puntland iyo Jubbaland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Indhocadde oo ku eedeeyay dowlada Soomaliya inay u nugushahay maamulada Puntland iyo Jubbaland
MAREEG 31 July 2015
General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhocadde ayaa ku eedeeyay dowlada Soomaaliya inay u nugushahay maamulada Puntland iyo Somaliland ayna marwalba siiso wax aysan lahayn.
Yuusuf Maxamed Siyaad ayaa sheegay in dowlada Soomaaliya ay siisay maamuladaasi xaq aysan lahayn isla markaana ay mar walba maamuladaas ku abaaldhaamaan dowlada.
“Dowladda federaalka Soomaaliya iyada ayaa halkaan gaarsiisay Maamulada Puntland iyo Jubbaland,waayo waxaa ay u samaysay wax aan loo sameyn maamulada kale ee ka jira dalka,iyada oo raadineysa maslaxada dalka,balse Puntland iyo Jubbaland waxaa ay rabaan waxii la baray.”ayuu yiri General Indhocadde oo mar ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyada dalka.
“Madaxda dalka ayaa heerkaan gaarsiiyay waxaana tusaale kaaga filan in Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan Garowe ayuu Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ka tegey una dhoofayka Keny, taas miyaan aheyn in la baray wax aan la barin maamulada kale?”ayuu sii raaciyay Indhacadde.
Sidoo kale Sheikh Yuusuf Maxamed Siyaad ayaa ka hadlay aragtida uu ka qabo sababta ay Puntland uga maqneyd shirka New Deal ee Muqdisho lagu qabtay ay tahay maxaa loo sameeyay Maamulka Galmuudg,waxuuna intaa ku daray in aysan suuro gal aheyn in maamul loo dumiyo maamul kale.Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaan ka qeyb galin Shirkii Caalamiga ahaa ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho
Puntland oo qaadacday Siyaasada Xukuumada Federaalka kuna dhawaaqday Shirweyne Qaran [Warsaxafadeed